संक्षिप्त परिचय | नमोबुद्ध नगरपालिका
आज भन्दा करिब ६ हजार बर्ष पहिले राजा सिंघत छेन्पो नाम गरेका राजाले राज्य गर्थे । उनका ३ भाई छोराहरु क्रमसः जेठा, माइला र कान्छा ड्राआ छेन्पो, लाहा छेन्पो, सेमचेन छेल्पो थिए । जेठा र माईला राजकाज एवं युद्धकलामा निपूर्ण रहेका र कान्छा छोरा सुशील, दयालु र सहनशील स्वभावका थिए । उनै कान्छा छोरा सेमचेन छेल्पोले आफ्ना पाँच ओटा डमरु सहितकोबघिनीभोको र अचेत रुपमा सुतिरहेको अवस्थामा देखि आफ्नो तिघ्राको मासु टुक्राटुक्रा पारी, छाती खोपेर रगत निकाली बघिनीलाई खुवाएको इतिहास रहेको पाइन्छ । साथै उक्त राजकुमार नै पछि गएर गौतम बुद्ध बनेको र पाँचवटा बघिनीका बच्चाहरु शिष्य भएको साथैतिनै राजकुमारको नामबाट यस नगरपालिकाको प्रमुख धार्मिक स्थलको नाम नमोबुद्ध रहन गएको किम्बदन्ती छ । नेपालको वर्तमान संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रत्येक नगरपालिका एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ । नगरपालिकाको आफ्नो छुट्टै छाप हुनेछ । नगरपालिकाले व्यक्ति सरह चल–अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न र बेच–विखन गर्न सक्नेछ । नगरपालिकाले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न र सो उपरपनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख गरे अनुसार नै यस नगरपालिका पनि सञ्चालन र व्यवस्थित गरिएको छ । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा हाल छ वटा नगरपालिकाहरु गठन भएका छन् । गठन भएका मध्ये यस नमोबुद्ध नगरपालिका पाँचौ नगरपालिका हो । यो नगरपालिका साविकका ८ वटा गाविसहरु मथुरापाटी, फुलवारी, मेथिनकोट, कानपूर कालापानी, खनालथोक, पुरानोगाउँ दाप्चा, छत्रेबाँझ दाप्चा, डराउने पोखरी र श्यामपाटि सिमलचौर मिलाएर बनाईएको छ । यस नगरपालिकामा ऐतिहासिक स्थान नमोबुद्ध, दाप्चा, फुलवारी र भकुण्डेबेशीँ लगायतका अधिकांश क्षेत्रमाकृषि, व्यापार र व्यवसाय संग सम्वन्धित प्रचुर सम्भावनाहरु रहेका छन् । यस नगरपालिकामा विशेष गरी हिन्दु, वौद्ध र इशाई धर्मावालम्वीहरुको बसोबास रहेको छ । यहाँ ब्राह्मण, क्षेत्री र तामाङ्ग जातिको बाहुल्यता रहेको छ । यहाँका नागरिकहरुले कृषि, पशुपालन र व्यापारलाई मुख्य पेशाको रुपमा ऐतिहासिक कालबाटै अँगाल्दै आएका छन् । धुलिखेल, बनेपा र काठमाडौं उपत्यकाबाट नजिक रहेकोले यस नगरपालिकाको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक विकासमा प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव परेको छ । यहाँ उत्पादन हुने कृषिजन्य तथा पशुजन्य उपजहरु तिनै बजार क्षेत्रमा बढी खपत र विक्री हुने गरेको छ । भौगोलिक रुपमा मध्यम स्तरीय पहाडी धरातल रहेको यस नगरमा मानव बसोबास र पर्यटन व्यवसायको लागि अति उपयुक्त स्थानहरु रहेका छन् ।
साविकका गा.वि.स. का वडाहरू साविक दाप्चा कशिखण्ड न.पा.का वडा नमोबुद्ध न.पा.को हालको वडाहरु जनसंख्या क्षेत्रफल(वर्ग कि.मी.)
मथुरापाटि फुलबारी १, २, ४, ५ र ९ १ १ २०६२ ५.७४
श्यामपाटी सिमलचौर १, २ र ३ - १
मथुरापाटि फुलबारी ३, ६, ७ र ८ २ र ३ २ ३४२२ १२.३६
मेथिनकोट ३, ४, ५, ६, ७, ९ ४ र ५ ३ २६०९ ७.७४
मेथिनकोट १, २ र ८ ६ ४ २११२ १३.६६
कानपुर कालापानी १ - ९ - ५ ४३७६ १८.७६
खनालथोक १, २ र ९ ७ ६ १५१४ ५.२२
खनालथोक ३, ४, ५, ६, ७ र ८ ८ र ९ ७ ३१९३ ७.६
डराउनेपोखरी १ - ९ १४ र १५ ८ २६८४ ८.६४
छत्रेबाँझ १, २, ३, ४, ५, ७, ८ र ९ १२ र १३ ९ २७६६ ९.२३
छत्रेबाँझ ६ ११ १० १९८८ ४.३८
पुरानागाँउ दाप्चा १ - ९ १० र ११ १०
श्यामपाटी सिमलचौर ४ - ९ - ११ २७९३ ९.०५
"कृषि,व्यापार र पर्यटन: हाम्रो सशक्त अभियान"